အလှပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဝေါဟာရများ (အပိုင်း - ၁) - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on June 18, 2015 at 11:21 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဒီသင်ခန်းစာကတော့ မိန်းကလေးအားလုံးစိတ်ဝင်စားမဲ့ အလှပြင်ခြင်းဆိုင်ရာဝေါ်ဟာရတွေအကြောင်းကို www.englishteachermelanie.com/video-makeup-vocabulary မှာဆရာမ Melanie ကရှင်းပြထားတာကို ဆီလျှော်သလို ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာကိုဖတ်ပြီးပါက အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုခေါ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ အလှပြင်နည်းအဆင့်တွေကို ခေါ်တဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးတွေကို နားလည်ပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဝက်ဗဆိုက်မှာ ဗီဒီယိုတင်ထားလို့ conection ကောင်းသူများသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ရှင်တို့ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကို ဘယ်မှာ သိမ်းလဲ? ကျွန်မကတော့ ကျွန်မရဲ့ အလှပြင်ပစ္စည်းတွေကို ရေချိုးခန်းဗီရိုအံဆွဲ (bathroom drawer) ထဲမှာ သိမ်းရတာ ကြိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိတ်ကပ်အိတ် (makeup bag) (သို့) မိတ်ကပ်သေတ္တာ (makeup case) ကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ကပ်အိတ်နဲ့ မိတ်ကပ်သေတ္တာတွေက ဘောင်ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံ၊ အရွယ်မျိုးစုံနဲ့ လာကြပါတယ်။
မျက်နှာကို မချယ်ခင် ပစ္စည်းအားလုံး အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် သေသေချာချာလုပ်ထားပါ။ စုတ်တံ (brush) တွေဟာ သန့်ရှင်းပြီး အလုပ်စဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေဖို့ သေသေချာချာ လုပ်ပါ။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့ ပစ္စည်းတချို့ (cleanup products) ကို အသင့်ထားတာကလည်း ကောင်းတဲ့အကြံပါပဲ။ ဥပမာပေးရရင်တော့ Kleenex (တစ်သျှူးစက္ကူ) ၊ cotton pad (ဂွမ်းဖတ်တွေ)၊ cotton ball (ဂွမ်းလုံး) (သို့) cotton puff (ဂွမ်းအဆုပ်လေးတွေ)၊ q-tip လို့ခေါ်တဲ့ နားကျပ်ဂွမ်းတံလေးတွေ၊ wash cloth (ဖလန်နယ်စလေး) တွေအပြင် မိတ်ကပ်ကို ဖျက်တဲ့ အထူးမိတ်ကပ်သန့်စင်အ၀တ်စ ဖြစ်တဲ့ cleansing wipes လိုဟာမျိုးတွေပေါ့။ Cleansing wipes တွေကတော့ မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေးပါပြီးသား တစ်သျှူးအလွှာလေးတွေပဲ ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပေါ်က မိတ်ကပ်ကို သူတို့နဲ့ ဖျက်လိုက်ရုံပဲ။ အမှားလုပ်မိလို့ လိုလိုမယ်မယ် မိတ်ကပ်ဖျက်ရရင်ပေါ့။
အလှမပြင်ခင်မှာ သန့်စင်နေတဲ့ မျက်နှာနဲ့စဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရှင်တို့ရဲ့ မိတ်ကပ်ကို ပိုပြီး သဘာဝကျစေပါတယ်။ အသားအရေစိုပြေစေဖို့ moisturise လုပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ အလှဆီ/ကရင်မ် (moisturiser) က ရှင်တို့ရဲ့ အသားအရေကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
အမျိုးသမီးအများအပြားကတော့ အောက်ခံမိတ်ကပ် (primer) ကို အသုံးပြုရတာကို ကြိုက်ကြပါတယ်။ Primer ကတော့ မိတ်ကပ်အတွက် base (အောက်ခံ) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက မိတ်ကပ်ချယ်ရန်အတွက် ရှင်တို့ရဲ့ အသားအရေကို အသင့်ပြင်ပေးပြီး မိတ်ကပ်ကိုလည်း တစ်နေ့လုံး ခံနိုင်အောင် (stay on longer throughout the day) ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီ primer ကို base perfector (အောက်ခံကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မွမ်းမံပေးသောအရာ) လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ၄င်းက အသားအရေပေါ်က အနာအဆာ (imperfection) များကို ချောမွေ့အောင်၊ pore လို့ခေါ်တဲ့ ချွေးပေါက်လေးများ လျော့နည်းသွားအောင်၊ ထင်ရှားတဲ့အရေးအကြောင်း (fine lines) တွေကိုနည်းသွားအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
Bathroom drawer = ရေချိုးခန်းထဲက ကောင်တာအောက်မှာရှိတဲ့ ဗီရိုရဲ့ အံဆွဲ
Makeup bag/ makeup case = မိတ်ကပ်အိတ်ဆိုသည်မှာ သေတ္တာကဲ့သို့သော ပုံစံဖြစ်သည်။ မိတ်ကပ်အိတ်ကို ပျော့ပြောင်းပြီး တောက်ပသော အရောင်ရှိသည့် အထည်သားဖြင့် ချုပ်လုပ်ပြီး အထဲမှာ လိုင်နင်ခံထားပါသည်။ မိတ်ကပ် သေတ္တာ၏ ကိုယ်ထည်ခွံသည် ပို၍ မာကျောပြီး ပို၍ ခိုင်ခံ့ပါသည်။
Makeup remover = မျက်နှာမှ မိတ်ကပ်ကို ဖျက်ရန် အထူးဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အရည်တစ်မျိုး။
Put on (makeup) = (မိတ်ကပ်) လိမ်းချယ်သည်
ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။ ဆရာမ Melanie ရဲ့ မူရင်းဝက်ဗ်ဆိုက် www.englishteachermelanie.com/video-makeup-vocabulary မှာ ဗီဒီယိုတင်ထားလို့ connection ကောင်းသူများသွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်လို့ ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်။ မနက်ဖြန်မှာ မိတ်ကပ်အောက်ခံ (Foundation) အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာပြီး သက်ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရအသုံးတွေကိုပါတစ်ခါထဲ မှတ်သားကြမယ်နော်။
ဒီသငျခနျးစာကတော့ မိနျးကလေးအားလုံးစိတျဝငျစားမဲ့ အလှပွငျခွငျးဆိုငျရာဝျေါဟာရတှအေကွောငျးကို www.englishteachermelanie.com/video-makeup-vocabulary မှာဆရာမ Melanie ကရှငျးပွထားတာကို ဆီလြှျောသလို ဘာသာပွနျထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီသငျခနျးစာကိုဖတျပွီးပါက အလှပွငျပစ်စညျးတှကေိုဘယျလိုချေါရမယျဆိုတာနဲ့ အလှပွငျနညျးအဆငျ့တှကေို ချေါတဲ့ဝျေါဟာရအသုံးတှကေို နားလညျပွောဆိုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ မူရငျးဝကျဗဆိုကျမှာ ဗီဒီယိုတငျထားလို့ conection ကောငျးသူမြားသှားရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျ။
ရှငျတို့ အလှပွငျပစ်စညျးတှကေို ဘယျမှာ သိမျးလဲ? ကြှနျမကတော့ ကြှနျမရဲ့ အလှပွငျပစ်စညျးတှကေို ရခြေိုးခနျးဗီရိုအံဆှဲ (bathroom drawer) ထဲမှာ သိမျးရတာ ကွိုကျတယျ။ ဒါပမေဲ့ မိတျကပျအိတျ (makeup bag) (သို့) မိတျကပျသတ်ေတာ (makeup case) ကိုလညျး သုံးနိုငျပါတယျ။ မိတျကပျအိတျနဲ့ မိတျကပျသတ်ေတာတှကေ ဘောငျပုံသဏ်ဍာနျမြိုးစုံ၊ အရှယျမြိုးစုံနဲ့ လာကွပါတယျ။
မကျြနှာကို မခယျြခငျ ပစ်စညျးအားလုံး အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျ သသေခြောခြာလုပျထားပါ။ စုတျတံ (brush) တှဟော သနျ့ရှငျးပွီး အလုပျစဖို့ အဆငျသငျ့ဖွဈနဖေို့ သသေခြောခြာ လုပျပါ။ သနျ့ရှငျးရေးလုပျတဲ့ ပစ်စညျးတခြို့ (cleanup products) ကို အသငျ့ထားတာကလညျး ကောငျးတဲ့အကွံပါပဲ။ ဥပမာပေးရရငျတော့ Kleenex (တဈသြှူးစက်ကူ) ၊ cotton pad (ဂှမျးဖတျတှေ)၊ cotton ball (ဂှမျးလုံး) (သို့) cotton puff (ဂှမျးအဆုပျလေးတှေ)၊ q-tip လို့ချေါတဲ့ နားကပျြဂှမျးတံလေးတှေ၊ wash cloth (ဖလနျနယျစလေး) တှအေပွငျ မိတျကပျကို ဖကျြတဲ့ အထူးမိတျကပျသနျ့စငျအဝတျစ ဖွဈတဲ့ cleansing wipes လိုဟာမြိုးတှပေေါ့။ Cleansing wipes တှကေတော့ မိတျကပျဖကျြဆေးပါပွီးသား တဈသြှူးအလှာလေးတှပေဲ ဖွဈပွီး မကျြနှာပျေါက မိတျကပျကို သူတို့နဲ့ ဖကျြလိုကျရုံပဲ။ အမှားလုပျမိလို့ လိုလိုမယျမယျ မိတျကပျဖကျြရရငျပေါ့။
အလှမပွငျခငျမှာ သနျ့စငျနတေဲ့ မကျြနှာနဲ့စဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ရှငျတို့ရဲ့ မိတျကပျကို ပိုပွီး သဘာဝကစြပေါတယျ။ အသားအရစေိုပွစေဖေို့ moisturise လုပျဖို့ကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ အလှဆီ/ကရငျမျ (moisturiser) က ရှငျတို့ရဲ့ အသားအရကေို ကာကှယျပေးပွီး ပိုမိုကောငျးမှနျအောငျ လုပျပေးပါတယျ။
အမြိုးသမီးအမြားအပွားကတော့ အောကျခံမိတျကပျ (primer) ကို အသုံးပွုရတာကို ကွိုကျကွပါတယျ။ Primer ကတော့ မိတျကပျအတှကျ base (အောကျခံ) ပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူက မိတျကပျခယျြရနျအတှကျ ရှငျတို့ရဲ့ အသားအရကေို အသငျ့ပွငျပေးပွီး မိတျကပျကိုလညျး တဈနလေုံ့း ခံနိုငျအောငျ (stay on longer throughout the day) ပွုလုပျပေးပါတယျ။ ဒီ primer ကို base perfector (အောကျခံကို အကောငျးဆုံးဖွဈအောငျ မှမျးမံပေးသောအရာ) လို့လညျး ချေါပါတယျ။ ၎င်းငျးက အသားအရပေျေါက အနာအဆာ (imperfection) မြားကို ခြောမှအေ့ောငျ၊ pore လို့ချေါတဲ့ ခြှေးပေါကျလေးမြား လြော့နညျးသှားအောငျ၊ ထငျရှားတဲ့အရေးအကွောငျး (fine lines) တှကေိုနညျးသှားအောငျ လုပျပေးပါတယျ။
Bathroom drawer = ရခြေိုးခနျးထဲက ကောငျတာအောကျမှာရှိတဲ့ ဗီရိုရဲ့ အံဆှဲ
Makeup bag/ makeup case = မိတျကပျအိတျဆိုသညျမှာ သတ်ေတာကဲ့သို့သော ပုံစံဖွဈသညျ။ မိတျကပျအိတျကို ပြော့ပွောငျးပွီး တောကျပသော အရောငျရှိသညျ့ အထညျသားဖွငျ့ ခြုပျလုပျပွီး အထဲမှာ လိုငျနငျခံထားပါသညျ။ မိတျကပျ သတ်ေတာ၏ ကိုယျထညျခှံသညျ ပို၍ မာကြောပွီး ပို၍ ခိုငျခံ့ပါသညျ။
Makeup remover = မကျြနှာမှ မိတျကပျကို ဖကျြရနျ အထူးဓာတုပစ်စညျးမြားဖွငျ့ပွုလုပျထားသော အရညျတဈမြိုး။
Put on (makeup) = (မိတျကပျ) လိမျးခယျြသညျ
ဒီနတေ့ော့ဒီလောကျပါပဲ။ ဆရာမ Melanie ရဲ့ မူရငျးဝကျဗျဆိုကျ www.englishteachermelanie.com/video-makeup-vocabulary မှာ ဗီဒီယိုတငျထားလို့ connection ကောငျးသူမြားသှားရောကျလလေ့ာနိုငျပါတယျလို့ ထပျပွီးပွောခငျြပါတယျ။ မနကျဖွနျမှာ မိတျကပျအောကျခံ (Foundation) အသုံးပွုနညျးကိုလလေ့ာပွီး သကျဆိုငျတဲ့ဝျေါဟာရအသုံးတှကေိုပါတဈခါထဲ မှတျသားကွမယျနျော။
Permalink Reply by Emerald Gold on June 19, 2015 at 14:11
Permalink Reply by ミインチヨ on June 20, 2015 at 2:54
Permalink Reply by Cho Cho Nwe on June 26, 2015 at 11:48